New patent inoratidza kuti iyo Apple Watch inogona kuyera BP Ndinobva mac
Mutsva patent inoratidza kuti iyo Apple Watch inogona kuyera BP
Apple inoda wachi yayo kuve chishandiso chakaringana kuyera hutano hwevanhu. Nemabasa aunazvo izvozvi seECG neaya aunoda kuwedzera se kudzivirira kuvhunduka, hazvina kukwana. Iyo patent nyowani inosimbisa kuti iyo kambani yeAmerica inoda iyo Apple Watch kuve inokwanisa kuyera BP. Izvo isu zvatinowanzoidza kuti kuyera tension.
Zvinotaridza kupenga, nekuti pazviyero zverudzi urwu zvishandiso zvakakura uye zvinonetsa kupfuura wachi zvakashandiswa kusvika zvino, asi kambani yekuAmerica inoda kuzviita uye hapana ekunze ekunze chero mhando.
Apple inoda iyo Apple Watch kuti igone kuona kukanganiswa kweropa kwatinako uye pasina chero pariperi yekuibatsira iyo mune irwo ruzivo. Zvinoenderana ne patent nyowani, iyo inonzi 10.646.121 yakaburitswa, wachi yacho yaizokwanisa kuyera kumanikidza. ine yakafanana data chaiyo kuzvigadzirwa zvemishonga zviripo izvi.
Zvinokurudzirwa naApple ndizvozvo Panzvimbo pekuve nema sensors akarongedzwa kuburikidza ne bracelet kana chimwewo chinowedzerwa chiuno chewrist, wachi yacho pachayo inowana kuverenga kubva mubhendi rema sensors. Iko kusanganiswa kwehardware uye software kwaizotora mukana weiyi renji yemasaenzi kuverenga kuverenga chaiko.
Kunyangwe gwaro re patent risingataure zvakajeka nezve Apple Watch, rinotaura nezve chishandiso chewrist. Asi iyo kambani haigone kuda kushambadzira yetsika mudziyo weiri basa. Kunyanya tichifunga nezvekuedza kuri kuitwa nekambani kuunza mitezo mitsva yehutano paApple wachi.
Semazuva ese patinotaura nezve patent, tinofanirwa kutaura kuti zvinogona kana kusazobuda. Panguva ino ingori zano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mutsva patent inoratidza kuti iyo Apple Watch inogona kuyera BP
Samsung wachi inozoiwedzera mukudonha.
Podcast 11 × 35: Runyerekupe nezve iPhone 12 uye AirPods Studio
Panogona kunge paine prototype ye "Apple Magirazi" ehuremu dhizaini